AnkerWork B600, webcam feno indrindra amin'ny tsena | iPhone News
AnkerWork B600, webcam feno indrindra amin'ny tsena
louis padilla | 05/05/2022 20:40 | Nohavaozina amin'ny 06/05/2022 13:15 | Fitaovana IPhone, maro
Ny AnkerWork B600 dia mihoatra lavitra noho ny webcam satria misy, ho fanampin'ny fakan-tsary 2K 30fps, mpandahateny roa, mikrofonina efatra ary bara jiro LED azo ahena..
Webcam dia nanjary tena ilaina amin'ny ankamaroan'ny ankehitriny. Na ho an'ny manaova fihaonambe video any am-piasana na miaraka amin'ny namana sy fianakaviana, na hanao streaming manokana mivantana, ny fananana webcam dia tena ilaina amin'ny biraon'ny olona rehetra, ary ny mpanamboatra dia manatsara ny modely amin'ny filokana mihoatra ny webcam mahazatra, toa an'ity AnkerWork B600 ity izay mihoatra lavitra noho ny webcam.
Amin'ny maha fakan-tsary dia mahita kalitao 2K (1440p) hatramin'ny 30fps isika, ambony noho ny ankamaroan'ny webcam izay ho hitantsika eny an-tsena. Fa misy ihany koa ny mpandahateny roa eo amin'ny sisiny, mikrô efatra ary LED bar azo amboarina amin'ny hamafin'ny hafanana sy ny hafanana, mahatratra angony ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fitaovana tokana mba hisongadina amin'ny fihaonambe video ataonao.
3 Sary, hazavana ary feo
Fanapahan-tsary 2K (1440p)
Jiro fanaraha-maso manual sy mandeha ho azy (famirapiratana sy maripana)
fanafoanana ny tabataba, fanafoanana ako
Fanatsarana sary amin'ny alàlan'ny faharanitan-tsaina artifisialy
FOV azo ahitsy (65º, 78º, 95º)
2 mpandahateny 2W
H.264 endrika lahatsary
Ny bara video, araka ny antsoin'i AnkerWork hoe B600, dia mavesatra sy lehibe, lehibe kokoa ny habeny sy ny lanjany noho ny ankamaroan'ny maodely hafa mahazatra anao. Izy io koa dia ahitana singa izay tsy misy webcam hafa, noho izany ny fahasamihafana dia mihoatra noho ny rariny. Tsara ny fanamboarana azy, ary plastika no fitaovana lehibe indrindra fa miaraka amin'ny vita metaly izay manome endrika premium. Toa mafy orina izy io ary na dia eo aza ny habeny dia manana endrika izay tsy mampaninona anao ny manampy ny biraonao.
Azonao atao ny mametraka azy eo an-tampon'ny monitor, toy ny webcam rehetra, fa manana safidy koa ianao amin'ny fampiasana tripod na izay rafitra fametahana hafa misy visy 1/4 noho ny kofehy eo amin'ny fotony. Ny fototra dia azo ampifanarahana amin'ny fanaraha-maso rehetra, na tery toy ny solosaina finday na matevina, na dia misy lamosina miolikolika aza, toy ny tamin'ny tenako. Mitana tsara ary stable. Azonao atao ny mitongilana sy manodina azy mba hahazoana ny zoro mety hifantoka aminao.
Mba hampifandraisana azy amin'ny solosainao dia manana tariby USB-C mankany USB-C izy io, izay hikarakara ny fitondrana ny fampahalalana rehetra momba ny sary sy ny feo, fa koa, ary sambany aho mahita izany amin'ny fakantsary toy izany. , mila sakafo fanampiny, Heveriko fa ho an'ny jiro LED. Izany hery izany dia azo amin'ny alalan'ny tariby misy adaptatera herinaratra izay mandeha mivantana amin'ny socket, tsy mifandray amin'ny solosainao, ka ny iray amin'ny USB-C-nao ihany no hampiasainy. Misy USB-A fanampiny koa izy io mba hampifandraisanao fitaovana fanampiny, izay ho toy ny hoe mampifandray azy amin'ny solosaina, zavatra tsy maharary.
Ny fandrafetana ny fakan-tsary dia natao ka ny fonony mihitsy, izay manome anao fiadanan-tsaina fa tsy misy mijery anao rehefa tsy tianao, dia ilay misy ny jiro LED, ka rehefa ianao sokafy ny fakan-tsary ny LED bar mipetraka eo ambonin'ny family mba hanazava ny tavanao. Ny LED eo anoloana dia milaza aminao raha ampiasaina ny fakan-tsary (manga) na raha miasa na tsia ny mikrô (mena). Farany dia manana bokotra roa mikasika ny lafiny roa izahay mba hampavitrika ny mikrô sy ny bar LED, ary ny fanaraha-maso eo anoloana hifehy ny famirapiratry ny LED bar.
Ny fanaraha-maso amin'ny tanana rehetra dia mora ampiasaina indraindray, saingy matetika dia tsara kokoa ny mampiasa ny totozy mba hifehezana ireo fiasa rehetra ireo, ary noho izany dia manana fampiharana AnkerWork izay azontsika alaina ho an'ny Windows sy macOS (rohy). Amin'ity fampiharana ity dia afaka mifehy ny kalitaon'ny sary (famaha, FOV, famirapiratana, maranitra...) ary hazavana (intensité sy maripana).
Ny fampiharana dia manolotra antsika fiasa mandeha ho azy izay mampiasa ny faharanitan-tsaina artifisialy mba hifehezana ny tenany. Ohatra, afaka manetsika ny jiro mandeha ho azy, na ny antsoina hoe "Solo-frame", fomba sary izay anarahan'ny fakan-tsary anao ary mitazona anao hatrany amin'ny efijery, mitovy amin'ny ataon'i Apple amin'ny "Sage Center" ao amin'ny FaceTime. Manana fiasa mahaliana ihany koa izahay toy ny "Anti-Flicker" mba hialana amin'ny fikitikitihana manelingelina ny jiro sasany rehefa mampiasa ny fakantsary.
Sary, hazavana ary feo
Tsara ny kalitaon'ny sarin'ny fakan-tsary, na dia ao anatin'ny toe-javatra maivana aza noho ny LED bar, izay hodinihina any aoriana. Ho an'ny fitsapana izay hitanao ao amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ilay lahatsoratra, dia nampiasa ny fepetra mitovy amin'izay ampiasaiko matetika amin'ny fandefasana ny podcasty ao amin'ny YouTube aho, izay tena marina. toe-javatra tsy mety fa manome fahatsapana tsara amin'ny fahombiazan'ny fakantsary izy ireo.
Marina fa nahatsikaritra aho tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fandraketana fa misy fanamafisam-peo somary mihoapampana amin'ny sary, ataoko fa noho ny fampihenana ny tabataba sy ny fanovana hafa izay ataon'ny faharanitan-tsaina ho azy. Saingy ankoatra ny antsipiriany, amin'ny ankapobeny Tena afa-po aho tamin'ny vokatry ny fakan-tsary momba izany. Ataovy ao an-tsaina ihany koa fa mampiasa ny zoro fijerena kely indrindra aho, noho izany dia tapaka ny sary ary tsy azo ihodivirana ny fahaverezan'ny kalitao.
Andraikitra lehibe amin'ny kalitaon'ny sary ao amin'ny LED bar izay mampiditra ny fakantsary. Raha ny marina, nihevitra aho fa zavatra tsy misy ilana azy izany, satria mitranga amin'ny fakantsary hafa izay mitondra azy ary tsy mitondra na inona na inona, fa ny mifanohitra amin'izany. Ny fiantraikan'ny jiro amin'ny horonan-tsary dia tsikaritra, ary ny fifehezana ny famirapiratana amin'ny hamafin'ny dia tena ilaina ihany koa. Ny zavatra tsy hitako dia azonao atao ny mifehy ny hafanan'ny sary, tsy avy amin'ny hazavana ihany, satria hitako fa mafana ny loko na dia mampiasa ny fakantsary amin'ny feo mangatsiaka indrindra aza.
Ireo no singa roa manana fampisehoana tsara indrindra amin'ity AnkerWork B600 ity, tsy isalasalana. Manaraka ny mikrô, na fa ny mikrô efatra, izay miasa tsara fa ny naoty farany dia tsy avo toy ny amin'ny sary na ny jiro. Ho an'ny faharanitan-tsaina artifisialy maro, ny tabataba sy ny fampihenana ny akony ary ireo singa hafa ampidiriny, dia tsy azo atao ny mikrôfona efatra hita lavitra ny vavako sy ao amin'ny efitrano tsy misy fanamafisam-peo mba hanolotra vokatra azo ampitahaina amin'ny mikrofona kalitao toy ny iray efa nampiasaiko tamin'ny ankamaroan'ny video.
izany no fomba fijerin'ny olona iray izay tena mampiasa ny streaming, fa raha mifantoka amin'ny fihaonambe video isika dia tsara kokoa noho ny tsara indrindra ny vokany. Maro amin'ireo mpanadihady amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra no te hahazo ny feo atolotr'ity B600 ity miaraka amin'ny mikrôfony efatra. Ny endri-javatra Radar Voice izay mifantoka amin'ny feonao na dia lavitra aza ianao dia ilaina ihany koa amin'ny fihaonana amin'ireo mpandray anjara marobe izay lavitra ny fakantsary.
Ary avelako ho amin'ny farany ny mpandahateny herinaratra 2W roa hita eo amin'ny sisin'ny fakantsary. Vahaolana tsara ho an'ireo izay mampiasa solosaina tsy misy fanamafisam-peo izy ireo, saingy tsy manakaiky izay azon'ireo mpandahateny voatokana atolotra antsika. ny feo dia manana hery ara-drariny, ary tsara kalitao, tsy misy mihoatra. Averina indray, ho an'ny fihaonambe video, mihoatra noho ny ampy, saingy mahantra ny ampiasaina ho mpandahateny lehibe amin'ny ordinateranao.
Ny fakan-tsary AnkerWork B600 dia tonga lafatra ho an'ireo izay mitady vahaolana tokana ho an'ny fihaonambe video, na fakantsary tsara kalitao ho an'ny streaming. Miaraka amin'ny kalitaon'ny sary tsara sy ny jiro tsara mahagaga, dia tonga lafatra amin'ny fandefasana mivantana na manaitra ny rehetra amin'ny fihaonambe video. Ny fiasa roa hafa, ny mikrô sy ny fanamafisam-peo, dia tsy mahatratra ny haavony ilaina amin'ny fandehanana amin'ny toe-javatra tsara, na dia mihoatra noho ny ampy ho an'ny fihaonambe video aza. Lafo ny vidiny, mahita azy ao Amazon amin'ny €229,99 (rohy) na dia raisina avokoa izay rehetra tafiditra ao dia tsy dia be loatra izany.
Navoaka tamin'ny: May 5 amin'ny 2022
Fanovana farany: May 6 amin'ny 2022
Microphones sy mpandahateny mety amin'ny fihaonambe video
Microphone tsy ampy ho an'ny streaming
Mpandahateny tsy ampy ho an'ny fampiasana mahazatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » AnkerWork B600, webcam feno indrindra amin'ny tsena